अबको बहसको चुरो समाजवाद नै होः प्रचण्ड (सम्बोधनको पूर्ण पाठ) - Sisne Online
अबको बहसको चुरो समाजवाद नै होः प्रचण्ड (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
तर सँगसँगै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चल्ने बहस पनि एउटा अपरिहार्य प्रक्रिया हो। समाजमा चल्ने वर्ग सङ्घर्ष, वैचारिक धारा र प्रवृत्तिको सङ्घर्षको प्रतिविम्ब कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आइराख्छ। जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टी रहन्छ, तबसम्म पार्टीभित्र पनि सङ्घर्ष चलिराख्छ। हामी पनि कोही दुबिधामा हुन जरुरी छैन।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सङ्घर्ष पार्टी बाहिर समाजमा चलेको सङ्घर्षको प्रतिविम्बको रिफ्लेक्सनको रूपमा हुने हो। त्यहाँ कहिले श्रमजीवी वर्गको निम्ति निष्ठावान् प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। कहिले विजातीय प्रवृत्ति पनि हाबी हुने गर्छ र पार्टीहरूले रुपरंग बदल्दै जाने हुन्छ। अनि एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण र फुट्सम्म पनि मार्क्स एंगेल्सको समयमा समाजवादी आन्दोलनमा एकता कसरी पैदा हुन्छ। र समाजवादी आन्दोलनमा फुट कस्तो बेला पैदा हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्स र एंगेल्सले महत्त्वपूर्ण विचारहरू त्यति बेलै संश्लेषित गर्नु भएको थियो।
यसबारेमा पनि स्मरण गर्नु र अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकता एउटा निश्चित मूल्य मान्यता र विधि पद्धतिको आधारमा हुने कुरा हो। र त्यो एकता सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिन्छ। एकता चोचोमोचो मिलाएर हुने कुरा होइन। सङ्घर्षकै माध्यमबाट एकता पनि बलियो हुने हो। पार्टीभित्र र बाहिर पनि हुने विचारको सङ्घर्षबाट एकता बलियो हुँदै जाने कुरा हो। सङ्घर्ष र बहसभन्दा बाहिर तथाकथित एकताको माला जपेर एकता हुने कुरा होइन। यो सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिने कुरा हो। सङ्घर्षबाट एकता मात्र प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन।
इतिहासले पटकपटक देखाएको कुरा के हो भने एउटा सच्चा कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकता हासिल गर्ने सोच र विधि लिनुपर्दछ। तर यसो गर्दा एकता मात्र हासिल नभएर पार्टी फुटाउन पनि सक्छ। यही आधारमा समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा त्यति बेला एंगेल्सले पनि भन्नु भएको छ। त्यो कुरा विल्कुल वैज्ञानिक र सत्य साबित भएको छ। एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकता विश्वले धेरै पटक देखेको छ। कोही आदर्शवादी भ्रममा हुनु पनि जरुरी छैन। नेतृत्वले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
आज हामी कमरेड पुष्पलालको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दैछौं। स्वयम् पुष्पलालले के भोग्नु भयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो। जसको प्रक्रियामा तपाइ हामी हुर्केका छौं। जन्मेका छौं। तर, स्वयम् पुष्पलाल २००८ सालपछि महासचिवबाट हटाइनु, २०१० सालमा महासचिव बन्नबाट रोकिनु, २०१४ सालमा उहाँकै नीति र विचार पारित हुने तर नेतृत्वमा रायमाझी हुने बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति पुष्पलाल कमरेडले भोग्नुभयो। नीति एउटाको तर नेतृत्व त्यसका विरोधीको। तपाई हामीले यसो हेर्‍यौ भने अहिले पनि त्यस्तै भएको हो कि ? नीति र विचार एउटाको हुने तर नेतृत्व अर्कैको हुने भएको हो कि।
आज हामीले भोग्नुपरेको समस्याको चुरो त्यतै कतै छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने २०१४ मा पुष्पलालको जनवादी क्रान्तिको नीति पारित भएर पनि राजापरस्त रायमाझी आउने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने र भविष्यमा त्यस्तो प्रवृत्ति नहोस् भनेर हेर्नुपर्ने छ। यदि त्यस्तै हुने हो भने १४ सालपछि जस्तो स्थिति आयो, त्यस्तै हुनेछ। २०१४ सालपछि नीति एउटा र नेतृत्व अर्को भएपछि त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन दुर्घटनामा जाने नै थियो। त्यसमा कसैको पवित्र इच्छा हुँदैमा रोकिने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक विधि छ। नियम छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्छ। २०१७ सालमा दोस्रो महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको हालत के भयो। र २०१९ को महाधिवेशन पछि कसरी पार्टी छिन्न भिन्न हुने स्थिति भयो भन्ने इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले मार्क्स एंगेल्सले भनेका ती अन्तर्निहित वैज्ञानिक वस्तुवादी सच्चाइ हामीहरूले आफैले पनि हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भोगेको देख्न सकिन्छ।
निकै ठूलो उत्साह र निकै ठूलो भरोसा आम जनता र पार्टीभित्र पैदा भयो। तपाई हाम्रो जिज्ञासा अब कम्युनिष्ट पार्टी के हुन्छ ? स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक के हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन। एकता प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन वा महाधिवेशनसम्म नपुग्दै पार्टी विभाजन त हुने होइन भन्ने तमाम आशंका तपाईँहरूको मनमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। देशभरका कार्यकर्ता र जनताका कुरा हामी अनुभूत गर्छौँ। हामीले गठबन्धन बनाएर एउटै उम्मेदवार बनाएर चुनावमा जाँदा घोषणापत्रका केही आधारहरू बनाएका थियौं।
हामीले उन्नत अर्थतन्त्रसहितको सम्वृद्ध नेपालको एउटा सपना दिएका थियौं। हामीले सामूहिक रूपमा नेपाललाई समाजवादी दिशातिर लान चाहन्छौँ भनेका थियौं। हामीले यसरी अभियान चलाउँदै गर्दा जुन उत्साह पैदा भएको थियो, त्यसले जनतामा आशा र भरोसा पैदा भएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हामीले त्यसलाई कति कायम राख्न सक्यौं ? सक्यौं कि सकेनौं ? सकेनौं भने के कारणले सकेनौं के त्यस्तो कारण परेको छ ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा धन्यवाद पनि भन्यौं किनभने पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर उहाँले नमानेको भए त्यो लागू हुन सक्दैनथ्यो। त्यसको वैधानिक हैसियतका निम्ति सरकार चाहिन्थ्यो। तर, यदि फेरि पार्टीको सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णयलाई पालन गरेको सबै चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यो इमानदार प्रयास हुन सक्दैन। त्यसले फेरि अर्को विभ्रम पैदा गर्छ। त्यस कारण यो सिंगो राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा हो।
सबैको राष्ट्रिय एकताको प्रतिफल पनि हो। कम्युनिष्ट पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रतिफल पनि हो। र सरकारले पनि त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेकाले सरकार पनि धन्यवादको पात्र छ। यो पो सही कुरा हो। अनि त्यही पार्टी जसले यो नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गराउन निरन्तर दबाब दिए, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती र दलाल, जुन सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्न यति ढिलो गर्‍यो त्यसको चाहिँ देवत्वकरण ? यो हुन सक्दैन। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो। त्यस्तो भयो भने त्यहाँ इमानदारिता र पारदर्शिता हुँदैन। त्यहाँ विवेकले काम गरेको भन्ने हुँदैन। हामी यो कुरामा सबै सचेत हुनुपर्ने कुरा जरुरी छ। हामीले चुनावमा जे कुरा भनेका थियौं, त्यसरी हामी जान सकेका छैनौं।